युवाको नाममा ब्यापार नगरौ - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
युवाको नाममा ब्यापार नगरौ
केही संस्थाहरु अगस्त १२ तारिक कुरेर बसेका छन
कालिकोटको बरातुमा जन्मिएर, विभिन्न समाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल हुदै, युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको जिल्ला नेतृत्वदेखि, केन्द्रिय पदाधिकारी हुदै अहिले सिंगो युवाहरुको साझा संस्था युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ (थ्ल्ँ) नेपालको केन्द्रिय अध्यक्ष बन्न सफल हुनु भएको छ । नारायण गिरीसंग समग युवाको सवालमा समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
युवा गैसस महासंघको स्थापना किन ?
युवाबाट संचालित संघ संस्थाहरु बढ्दै जान थाले पछि तीनीहरुको हक, हित अधिकार स्थापीत गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणमा युवाको शशक्तिकरण साथै नीति निर्माण तहसम्ममा युवाहरुको अर्थपूर्ण पहँुचको लागि छाता संस्था आवश्यक छ भन्ने लागे पछि देशभरका युवाहरुकै सक्रियतामा यो महासंघ स्थापना भएको हो । जो सुकै युवा किन नहोस उहाँहरुले स्थापना गरेका संस्थाहरुलाई गोलबन्द गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार स्थापीत एक मात्र यो महासंघ युवा अधिकारको लागि संघर्षरत छ ।
महासंघले के गर्दै छ अहिले ?
वर्तमान देशको राजनैतिक अवस्था एकदमै संवेदनशिल छ । बिशेषत युवाहरुकै बलिदानीबाट भएका उपलब्धिहरु सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । यो अवस्थामा महासंघले पनि देशवासीका चासोका कुराहरुमा कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरीरहेको छ । हिजो युवा मन्त्रालय, युवा परिषद नहुदा पनि युवाको मुद्धा सुनुवाईका लागि छुट्टै मन्त्रालय, परिषद चाहियो भनेर सडकमा आवाज उठाउने यहि महासंघ थियो, भने अहिले युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिसंगै स्वरोजगार, उद्यमशिल बनाई आत्मनिर्भता तर्फ देशलाई लैजानु पर्छ भन्ने कुरामा महासंघ राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरसम्म शसक्त वकालतसंगै योजना निर्माणमा संलग्न छ ।
महासंघमा आवद्धता प्रक्रिया र सांगठनिक संरचना कस्तो छ ?
हाम्रो महासंघमा व्यक्ति सदस्य हुन पाउदैन, युवाको उध्येश्य बोकेको वा कार्यक्रम संचालन गर्ने ४० बर्ष ननाघेको युवा संस्थागतरुपले सदस्य हुन जिल्ला शाखा वा सोझै केन्द्रमा आवेदन दिएर प्रक्रिया पुरा गरेर सदस्यता प्राप्त गर्दछन् । बर्षमा एकचोटी मात्र नयाँ सदस्यता आह्वान गरीन्छ भने संस्था बर्षेनी नविकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । संरचनाको कुरा गर्दा ७७ वटै जिल्लामा शाखा रहेको यस महासंघको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो भने महासभा, केन्द्रिय समिति, सचिवालय, सल्लाहकार समिति र जिल्ला समितिहरु हुन्छन् ।
युवाहरुको मुद्धा एकातिर युवा संस्थाहरु अर्कैतिर हिडेको आरोप छ नी ?
नेपालको परिपे्रक्ष्यमा केही हदसम्म यो कुरा साचो पनि होला तर हाम्रो वास्तविकता त्यो होईन । हामीले बढी भन्दा बढी युवाको पक्षमा आवाज उठाउने हो जो सबैलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । दाता विना पनि स्वस्फुर्त युवा जागरण अभियान कसैले चलाएको छ भने त्यो हाम्रै महासंले चलाएको छ र दातालाई युवाको मुद्धामा एकिकृत गरेर परियोजना चलाएको पनि हामै्र उदाहरण छन् । हामी बाहेक केही संस्थाहरु छन् जो नाम मात्रै युवाका छन्, राष्ट्रिय युवा नीति अनुसार चलिराखेका छैनन् खाली युवा मुद्धा माग्ने र कमाउने भाडो बनाएका छन् । जागिर खान युवा मुद्धा बेच्न पाईदैन यो हाम्रो खवरदारी पनि हो । त्यति दुख गरेर बनाएको युवा परिषद ठोस काम भन्दा पनि केही घटना संगै फोटा खिचेर सार्वजनिक गर्ने र घुमघाममै गर्दैमा लाखौ स्वाहा गरेको छ । भने अर्का थरी युवा नाका केही संस्थाहरु अगस्त १२ तारिक कुरेर बसेका छन, किनकी युवाको नाम बेचर रामो व्यापार गर्न पाईन्छ । यो हामीहरु सबैकोलागि घातक कुरा हो अब फिल्टर गर्न आवश्यक छ ।
यो देशमा कतिवटा युवासंग सम्वन्धित महासंघहरु छन ?
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्र्तगत जे नाम राखेर पनि एनजिओ खोल्न जसलाई पनि अधिकार छ, विधि नियम कानुनको उपहास गर्नेहरु जहाँ गए पनि गरी हाल्छन्, आज एउटामा रहन्छन् भोली त्यस्तै अर्को खोल्न सक्छन् तर हाम्रो चिन्ता युवा मुद्धा ओझेल पार्नु हुन्न भन्ने भन्ने हो । समुह, गुटका संस्था महासंघ हुन सक्दैनन । एक दशक देखी देशभर क्रियाशिल रहेको सबै भन्दा ठुलो संरचना भएको र निर्देशन ऐन ०१८ अन्र्तगत स्थापित नेपाली युवा संस्थाहरुको साझा हाम्रो युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नै हो । अरु थाहा छैन ।
महासंघले हाल के के गर्दैछ ?
हामी हिजो पनि राज्यलाई चुनौती मात्र हैन जाहेज कुरामा सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौ । अहिले पनि हाम्रै संलग्नतामा निर्मित युवा नीति पुर्णरुपमा कार्यन्वयन गरीनु पर्छ भन्ने हो त्यस पछि लामो संघर्ष पश्चात स्थापीत युवा परिषद् छ त्यसको गरीमा कायम गर्दै देशभरका युवाहरुसंग हातेमालो गरेर दीगो विकासका लक्ष्यहरु संगै युवा क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउन लाग्नु पर्छ त्यसकोलागि महासंघ पुल बन्न तयार छ । देशी विदेशी संस्थाहरुसंग पनि हामी महासंघ हुनुको नाताले युवा संस्थाको उचित कुरा सुनुवाई र कार्यन्वयनको लागि दवाव दिदै युवा अधिकार सुनिश्चित गर्न विविध योजना बनेका छन् जो चाडै बाहिर आउने छन् ।
देशको यो अवस्थामा नागरीक समाजको हिसावले महासंघको कस्तो भुमिका रहन्छ ?
स्वभाविक हिसावले यो देशमा युवा गैर सरकारी संस्था महासंघले नागरीक संगठनको भुमिका निभाई रहेको छ । उल्लेखित समग्र विषयमा नागरीकलाई र राज्यलाई सचेत र जागरुक बनाउन आफ्ना गतिविधीहरु शशक्तरुपमा संचालन गरीरहेको छ । विभिन्न पार्टिहरु र सरकारलाई निरन्तर दबाब दिदै आएको छ । अव राज्यको हरेक निकायमा युवाको हस्तक्षेपकारी भुमिका भएन भने मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने डर अझै छ त्यसैले समृद्ध देशकोलागि महासंघ जागै बसेको छ ।
देशमा अहिले उपलब्धिकारुपमा आएका राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै दीगो विकासको लागि अगाडी बढ्न आवश्यक छ । त्यो बाटोमा महासंघ जोसंग पनि सहकार्य गरेर जान तयार छ, त्यसैले हामी एकजुट भएर अगाडी बढ्यौ भने संसार सुनौलो छ जो तपाई हाम्रै हातमा छ । आउनुहोस संगसंगै मिलेर अगाडी बढौ युवा शब्दलाई दुरुपयोग नगरौ ।
Published On: Monday, August 12, 2019 Time : 9:09:18 953पटक हेरिएको